'हाम्रो नेतृत्वलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाइदिन्छौं भनेर दिएको चेतावनीप्रति गम्भीर हौं'| Corporate Nepal
'हाम्रो नेतृत्वलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाइदिन्छौं भनेर दिएको चेतावनीप्रति गम्भीर हौं'
मंसिर १०, २०७७ बुधबार १५:२८
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन नजिक आएसँगै उम्मेदवारहरु उत्साहित बनेका छन् । आफुले पुर्याएको योगदान र आगामी दिनका कार्ययोजना सहित मत आफ्नो पक्षमा पार्ने योजना तीब्र बनिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा शेखर गोल्छा समूहबाट जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएका दिनेश श्रेष्ठ आफूले चुनाव जित्नेमा विश्वस्त देखिएका छन् । मंसिर १३ गते हुन गईरहेको निर्वाचनको सन्दर्भ पारेर श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सारः
जिल्ला नगरका साथीहरुले स्थानीय तहका उद्योग व्यवसायका सामान्य भन्दा सामान्य समस्याको सन्दर्भमा पनि महासंघको नेतृत्वले बोल्नु पर्ने माग राख्दै आएका छन । अब आउने नेतृत्वले यस्तो गर्न नसकेको खण्डमा महासंघको शाख झनै खस्कने अवस्था रहने देखियो नि ?
यो सही कुरा हो । जिल्ला नगरका साथीहरुले हाम्रो समुहलाई निर्वाचित गर्नु भएको खण्डमा चुनाव सकिएको ६ महिनामा महसुस हुने खालको काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गदर्छु । अहिले एउटा समुह नेतृत्व पनि नचाहिने गरी आफै काम गर्न सकिन्छ भन्ने उन्मादका साथ अघि बढेको देखिन्छ । कुनै एक समुहले हाम्रो नेतृत्वलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाइदिन्छौं पनि भनेका छन् । यस्ता विषयहरु प्रति जिल्ला नगरका साथीहरु सचेत भएर हाम्रो टिमलाई विजयी गराउने अभियानमा जुट्नु भएको छ । साथीहरुले हाम्रो टिमलाइ बिजयी गराएपछि हामीले जिल्ला नगरका साथीहरुले अनुभुती गर्ने गरी सेवा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छौं । सोही अनुसार काम पनि गर्छौ ।
छुट्टै चेम्बर ऐन बन्नु पर्छ, क्रेडिट ऐन, व्यवसायीको लगानी पनि सुरक्षित गरी सुरक्षित कारोबार ऐन आउनु पर्छ । अहिले कारोबार ऐन छ तर, त्यसका केही प्रावधानहरु गलत छन् । राज्य संयन्त्रका कर्मचारीले हामी प्रति देखाउने ब्यबहार गलत छ । यसकारणले पनि व्यवसायीहरुले नचाहेर पनि गलत बाटो अपनाएर व्यवसाय गर्नु पर्ने अवस्था छ । कर्मचारीलाइ कारबाही गर्ने भनेको विभागीय कारबाही रे । त्यो पनि गलत नियत देखिएको खण्डमा मात्र कारबाही गरीने भनिएको छ । कर्मचारीको नियत गलत र सही भनेर छुट्याउने मापदण्ड के हो ? यसले गर्दा पनि व्यवसायीहरुले कुनै निश्चित व्यक्तिको निहीत स्वार्थका लागि काम गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
साना व्यवसायीले मिति नाघेको सामान चाहेर किनेको होइन । ६ महिना मात्र म्याद भएका उत्पादनहरु आयात गर्न भन्सारले किन दियो ? भन्सारको त्यो कर्मचारीलाइ कारबाही गर्नु पर्छ की पर्दैन ?
अब हाम्रो खुला सिमाना आर्थिक रुपमा शिल गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । करका दरहरु उच्च भएका कारण बोर्डरमा नेपाली क्षेत्रको व्यवसाय सुन्य अवस्थामा छ भने छिमेकी देशपट्टी चहलपहल छ । सरकारले द्धन्द्धका कारणले खर्च धेरै आम्दानी थोरै भएको भन्दै १० प्रतिशतको भ्याटलाई ३ प्रतिशतले वढाएर १३ प्रतिशत कायम ग¥यो । अहिलेको अवस्थामा द्धन्द्ध त छैन । त्यसैले भ्याटको दरलाई घटाउनु पर्नेमा सरकारले त्यसमा कुनै ध्यान नदिएको देखिन्छ । करका दरहरु धेरै भएको खण्डमा चोरी पैठारी बढी हुन्छ । अनियमित कारोबार धेरै हुन्छ । कर, भन्सार, रोजगार तथा बैंक सम्बन्धमा धेरै समस्याहरु छन । यस्ता समस्याहरुलाइ समाधान गर्नका लागि महासंघ लागि पर्नेछ । हाम्रो समुहमा यी सबै समस्याका कारण र समाधानका बाटोहरु पहिल्याउने क्षमता राख्ने साथीहरु हुनुहुन्छ । यसमा देशभर साना तथा ठुला सबै उद्योगीको प्रतिक्रिया लिएर अघि वढ्छौ । यसमा राज्यले पनि नीजि क्षेत्रवाट के चाहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट भन्नु पर्छ ।
मदाताहरुले दुबै समुहको कुरालाई गम्भीर रुपमा अध्ययन गरेको देखिन्छ । मतदाताहरु यताको टिम र उताको टिमभन्दा पनि दुबैतर्फ आउने जाने गर्नु भएको छ । मतदाता साथीहरु कसैको दास पनि होइन । उहाँहरु स्वतन्त्र भएको हुनाले हाम्रो टिम विजयको नजिक रहेको स्पष्ट छ । स्वविवेक प्रयोग गर्दा सही निर्णय लिनका लागि साथीहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।